Yobhi 12 | IBhayibhile Kwi-Intanethi | INguqulelo Yehlabathi Elitsha
12 Waza waphendula uYobhi wathi: 2 “Enyanisweni nina madoda ningabantu, Yaye kuni ubulumko buya kufa!+ 3 Nam ndinentliziyo+ njengani. Andikho ngaphantsi kuni,+ Ngubani na ongenazo izinto ezinjengezi? 4 Ndiyintlekisa kwidlelane lam,+ Lowo ubiza uThixo ukuba amphendule.+ Oyintlekisa ngulowo ulilungisa, ungasolekiyo. 5 Kwiingcamango zakhe, lowo ungakhathaliyo ukudelile ukuphelelwa;+ Kulungiselelwe abo baneenyawo ezixengaxengayo.+ 6 Iintente zabaphangi azikhathazwa,+ Yaye abo bacaphukisa uThixo banokhuseleko Lwalowo uzise uthixo esandleni sakhe.+ 7 Noko ke, khawuncede, ubuze izilwanyana zasekhaya, zikuyalele;+ Kwanezidalwa ezinamaphiko zezulu, zikuxelele.+ 8 Okanye bonakalisa ukuxhalaba kwakho emhlabeni, uze wona ukuyalele;+ Yaye iintlanzi zolwandle+ ziya kukuvakalisa kuwe. 9 Ngubani na phakathi kwazo zonke ezi ongazi kakuhle Ukuba sisandla sikaYehova esenze oku,+ 10 Osesandleni sakhe umphefumlo+ wakhe wonk’ ubani ophilayo Nomoya wayo yonke inyama yabantu?+ 11 Ngaba indlebe ayiwavavanyi amazwi+ Njengoko inkalakahla+ ingcamla ukutya? 12 Ngaba akukho bulumko phakathi kwabalupheleyo+ Nokuqonda ebudeni bemihla? 13 Kuye kukho ubulumko namandla;+ Unecebo nokuqonda.+ 14 Khangela! Uyachitha, ukuze kungakhiwa;+ Uyayivala emntwini, ukuze ingavulwa.+ 15 Khangela! Uyawathintela amanzi aze ome;+ Uyawathumela, awutshintshe umhlaba.+ 16 Akuye amandla nobulumko bobuqili;+ Ngowakhe lowo wenza impazamo nalowo ulahlekisayo;+ 17 Wenza abacebisi bahambe benganxibanga ezinyaweni,+ Yaye uphambanisa abagwebi. 18 Imixokelelwane yookumkani uyayikhulula,+ Yaye ubopha ibhanti ezinqeni zabo. 19 Ababingeleli ubahambisa benganxibanga ezinyaweni,+ Aze abo bahleli ngokusisigxina ababhukuqe;+ 20 Ususa intetho kwabo bathembekileyo, Aze ingqiqo yamadoda amadala ayisuse; 21 Uphalazela izidwangube ngendelelo,+ Aze umbhinqo wabo banamandla awenze buthathaka; 22 Utyhila izinto ezinzulu ezisebumnyameni,+ Yaye uzisa ekukhanyeni ithunzi elimnyama; 23 Esenza iintlanga zikhule kakhulu, ukuze azitshabalalise;+ Esasaza iintlanga, ukuze azikhokelele kude; 24 Ususa intliziyo yabaziintloko ebantwini belizwe, Ukuze abenze babhadule endaweni engenanto,+ apho kungekho ndlela khona. 25 Baphuthaphutha ebumnyameni,+ apho kungekho kukhanya khona, Ukuze abenze babhadule njengomntu onxilileyo.+